ဆောင်းပါး၊ သံဃာ့ အာဇာနည်များ ဆရာတော် ဦးဝိစာရ၊ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ။ | NEW BURMA MEDIA
ဆောင်းပါး၊ သံဃာ့ အာဇာနည်များ ဆရာတော် ဦးဝိစာရ၊ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ။
ဦးဝိစာရ၏ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်သည် ၁၂၈၀ ( ၁၉– ) ပြည့်တွင် မန္တလေးအိမ်တော်ရာ
ဦးဝိစာရသည် ၁၂၈၂ ( ၁၉– ) လောက်တွင် ပခုက္ကူမှနေ၍ သံဃာ့သမဂ္ဂအဖွဲ့သို့ဝင်ပြီး မ
သည်။ ၎င်းတို့မှာ – – –
၀ံသာနုသတင်းစာတိုက်မှတကာများကို ဆရာတော်က ပက်လက်နေရာမှမိန့်ကြားရာတွင် –
ဆောက်ရွက်ကြပါ – ဟု မိန့်တော်မူခဲ့လေသည်။
ပျက်ဆီးနေရှာပြီဖြစ်သော ဦးဝိစာရ၏ နားအနီးကပ်၍ တပည့်တော်တို့ လာရောက်ကြည့်ရှု ပါသည်ဟု လျှောက်ထားရာ မျက်လုံးအိမ်ကို အနိုင်နိုင်ဖွင့်ကာ အားယူ၍ လေသံတိုးတိုးဖြင့်
ယာ…. မိ …။ တိုင်း …. ပြည် … ကို …. လိမ် …. မာ … ရစ် … ကြ …. ပါ … လို့ …. မှာ…
ကြား… လိုက် … ပါ … တယ် – ဟု နောက်ဆုံးမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
စစ်ဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဂုဏ်ပြုမိန့်ခွန်းတွင် – ကျွန်ုပ်တို့သည် မင်္ဂလာတရားတော်
ဆရာတော်ဦးဥတ်္တမသည် (၁၉၁၁) ခုနှစ်မှစ၍ ““သူ့ကျွန်မခံလိုပြီ””ဟု ဇာတိ သွေး၊ ဇာတိမာန်ထက်သန်စွာဖြင့် အမျိုး ဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ခဲ့သော ကျေးဇူးရှင် ရဟန်းသံဃာ တော်တစ်ပါးဖြစ်ပေသည်။
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဦးစွာ ပထမ မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးတစ်ရပ် လုံးအား စတင်တပ်လှန့်လှုံ့ဆော် နိုးကြား ထကြွစေခဲ့သည့် တစ်ဦးတည်းသောမျိုး ချစ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုခေတ်၊ ထိုအခါက နယ်ချဲ့ကိုလိုနီအစိုး ရပီပီ ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်မှု စနစ်ဆိုး၏ အလွန်အမင်းတရားမဲ့မှုနှင့်ခက်ထန်ကြမ်း ကြုတ်မှုတို့ကြောင့် မြို့ပေါ်ပြပေါ်တို့နှင့် ကျေးလက်တောရွာများပါမကျန် တုတ် တုတ်မျှ မလှုပ်ဝံ့၊ မဟ၀ံ့လောက်အောင် ကြောက်ရွံ့ရိုသေနေကြရသည်အထိ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် ပျက်ပြားအား နည်းနေချိန်လည်း ဖြစ်လေသည်။ သာမာန် မြို့နေလူတန်းစားများနှင့် တော နေတောင်သူလယ်သမား၊ ဆင်းရဲသား တို့အဖို့ မဆိုထားဘိ (၁၉၁၆)ခုနှစ် အတွင်း ““အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာ”” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် တက် တက်ကြွကြွ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည့် ခေတ်ပညာတတ် လူငယ်တစ်စုတို့၏ ဗုဒ်္ဓဘာသာ ကလျာဏယုဝ အသင်း (့ဗြ) ကဲ့သို့သောအသင်းအပင်းတို့ ၌ပင် အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်သည့် အခါတိုင်း ““အရှင်အင်္ဂလိပ်အစိုးရနှင့် တကွ ဂျော့ဘုရင် ဧကရာဇ်မင်းမြတ်နှင့် မေရီမိဖုရားကြီးတို့အား ဘုန်းတော်ကြီး၍ သက်တော်ရာကျော် ရှည်စေကြောင်း”” ဆုတောင်း ပဋ္ဌနာပြုလျက်နေကြသေး သည့်အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပေသည်။
ထိုနည်းတူစွာပင် စာသင်ကျောင်း တို့၌ ကလေးသူငယ်များအား ကျောင်း တက်၊ ကျောင်းဆင်းချိန်တိုင်း ဂျော့ဘုရင် နှင့် မေရီမိဖုရားကြီးတို့အား ရည်စူး၍ ““အောင်ဆုသြဘာ၊ မင်္ဂလာဖြင့်၊ ဆယ်ဖြာ လက်မြှောက်၊ ဆက်ခါလျှောက်လိမ့်”” အစချီသော မေတ်္တာပို့ဆုတောင်းရတုကို သံပြိုင်ဟစ်အော် ဆိုစေခဲ့သည်။ မင်းမှု ထမ်းမှန်သမျှ အဖြူ၊ အမဲမရွေး ကြီးသည်၊ ငယ်သည်မဟူ ဘုရားထူးခံရဘ၀အဖြစ် သို့ရောက်ရှိနေကြရသည်အထိ တန်ခိုး ရှိန်စော် ကြီးမားနေချိန်လည်းဖြစ်သည်။
တိုင်းပြည်နှင့်အ၀ှမ်း ထိုမျှလောက် ဇာတိသွေး၊ ဇာတိမာန် ခေါင်းပါးချို့တဲ့ နေသည်နှင့်အမျှ ကျွန်သက်ရှည်သည် ထက်ရှည်စေမည့် အခြေအနေသို့ ဆိုက် ရောက်အံ့ဆဲဆဲ ဆရာတော်ဦးဥတ်္တမ ကိုယ်တော်ကြီးသည် သူမတူအောင် ထူးကဲသော သူရသတ်္တိဖြင့် တစ်မျိုးသား လုံးအကျိုးစီးပွားအတွက် နယ်ချဲ့ကိုလိုနီ ဆန့်ကျင်ရေး၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက် ပွဲ စစ်မျက်နှာကို ဖွင့်၍ သူရဲကောင်းပီသ စွာ တပ်ဦးမှ မားမားမတ်မတ်ရပ်လျက် မနေမနားလှည့်လည်ဟောပြောရေးသား လှုံ့ဆော်စည်းရုံးခဲ့မှုကြောင့် သံဃာ့သမဂ်္ဂီ အဖွဲ့များဦးဆောင်သော (ဂျီ၊ စီ၊ ဘီ၊ အေ) မြန်မာအသင်းများနှင့် ကုမ်္မာရီအမျိုးသမီး အသင်းများ၏ ၀ံသာနုလုပ်ငန်းများသည် တိုင်းပြည် တစ်ဝှမ်းလုံး နေရာမလပ် နိုးကြားလှုပ်ရှားခဲ့လေသည်။
၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ဆရာစံဦးဆောင် သောတောင်သူလယ်သမားတို့၏ ပုန်ကန် မှုကြီးသည်ပင် ဆရာတော်ဦးဥတ်္တမ၏ ခေါင်းဆောင်မှုမှ ပေါက်ဖွားလာသော နိုင်ငံရေးသြဇာ၊ စည်းရုံးရေးသြဇာတို့၏ အထွဋ်အထိပ်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆယုံကြည် နိုင်လေသည်။သို့ကြောင့် ဆရာတော်ကြီး ၏ ကျေးဇူးတရားကို အဘယ်မှာကျွန်ုပ် တို့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ လစ်လျူရှု နိုင်ပါမည်နည်း။
ဆရာတော်ဦးဥတ်္တမသည် နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက် ၍လည်း ရစရာမရှိအောင်အပြင်းအထန် ရှုံချပုတ်ခတ်ဟောပြောရာတွင် ““လိပ်””ဆို လျှင် ဘာလိပ်မှ ကျက်သရေမင်္ဂလာမရှိ ဘူး ““လိပ်””ကိုပယ်နိုင်၊ စွန့်နိုင်မှ ဦးပဉ်္စင်း တို့ မြန်မာတွေညီညွတ်မယ်။ လွတ်လပ် မယ်၊ ချမ်းသာမယ်၊ အမျိုးဘာသာ၊သာ သနာတော်ကြီး စည်ပင်ဝပြောမယ်။ ဒကာမကြီးတို့ရဲ့ ဆိုကာမျှနှင့်တရားပွဲသို့ ရောက်ရှိနေကြသူ အမျိုးသမီးပရိသတ် ကြီးသည် မဆိုင်းမတွသူတို့၏ခေါင်းပေါ် မှ လိပ်ခွံဘီးများစွာတို့ကို ချွတ်ယူချိုးဖျက် စွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုမျှလောက်ပင် ဆရာတော်ဦးဥတ်္တမအပေါ်တွင်ကြည်ညို လေးစားမှု၊ ယုံကြည်အားထားမှု၊ ချစ်ခင် မြတ်နိုးမှု ကြီးမားလွန်းလှပေသည်။
ဤသို့ဖြင့် ဆရာတော်ဦးဥတ်္တမ ကိုယ်တော်ကြီးသည် မြန်မာတစ်မျိုးသား လုံး၏ ကျေးဇူးရှင်ဟု လည်းကောင်း၊ ကို လိုနီဆန့်ကျင်ရေးတပ်ဦး၏ အကြီးအမှူး စစ်သူကြီးဟုလည်းကောင်း၊ မြန်မာ့လွတ် လပ်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင်ဟုလည်း ကောင်း၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးစာရင်းဝင် အမှတ်(၁) ပုဂိ်္ဂုလ်ကြီးဟုလည်းကောင်း မှတ်ယူထိုက်ပေသည်။ မြောက်များစွာ သော ဂုဏ်ထူးဝိသေသအပေါင်တို့ကို ခံယူထိုက်အောင် တစ်သက်တာပတ်လုံး ကိုယ်ကျိုးစွန့်လွှတ်၍ အနစ်နာအပင်ပန်း ခံကာ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် စွန့် စားကြိုးပမ်းခဲ့မှုများကြောင့် ကိုလိုနီခေတ် ဦး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင် ပထမဆုံး စာမျက်နှာမှ ထိုက်ထိုက်တန်တန်ထည့် သွင်းအသိအမှတ်ပြု၍ မော်ကွန်းထိုးခဲ့ရ သည်မဟုတ်ပါလား။
၁၉၃၅ ခုနှစ် (၉၁)ဌာနအုပ်ချုပ်ရေး လက်ခံရန် ကျင်းပသော ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ၅ ပွင့်ဆိုင်နိုင်ငံရေးသမားအချို့ သည် ဆရာတော်ဦးဥတ်္တမအား အိန်္ဒိယ ပြည်မှလေယာဉ်ပျံဖြင့် လှည့်ပတ်ပင့် ဆောင်လာပြီးနောက် မဲဆွယ်တရား ဟောပြောပေးရန်အသုံးချခဲ့ကြသည်။ ဆရာတော်ဦးဥတ်္တမ၏ သြဇာအရှိန်အ၀ါ ဖြင့် ၅ ပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့သည် အမတ်ဦးရေ (၄၅)ယောက်ရရှိ၍ အင်အားအကြီးမား ဆုံးသော ပါတီကြီးအဖြစ် ဥပဒေပြုလွှတ် တော်သို့ရောက်ရှိသည်အထိ အမြတ် ထုတ်ယူခဲ့ကြပြီးနောက် ဘုရားပြီး ငြမ်း ဖျက်ဆိုသကဲ့သို့ ဆရာတော်ဦးဥတ်္တမအား စွန့်ပစ်လိုက်ကြလေသည်။ ထိုစဉ်က (၉၁)ဌာန အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ပထမ ဒေါက်တာဘမော်၊ နောက်ဦးပု၊ နောက် ဦးစောတို့က နန်းရင်းဝန်ရာထူးကို တစ် ဆင့်စီယူ၍ လုပ်ကိုင်နေကြစဉ်မှာပင် ဒုတိယကမ်္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်လေသည်။
နိုင်ငံရေးဂိုဏ်းဂဏ ကွဲပြားကြသော အခါတစ်ဘက်နှင့် တစ်ဘက် ပြင်းစွာ စွပ်စွဲဝေဖန်တတ်ကြရာ ဆရာတော် ဦးဥတ်္တမသည် ကာလကတ်္တားတွင်နေထိုင် စဉ်က မိန်းမယူထားသယောင်သတင်းစာ အချို့က စွပ်စွဲရေးသားခြင်းကိုပင် ခံခဲ့ရ သေး၏။ သို့သော်ဆရာတော်ဦးဥတ်္တမ ကား ရှူးရှူးရှားရှား ဒေါသမထွက်။ ဘုရားသည်ပင်လျှင် စိဉ်္စမာနမိန်းမယုတ် ၏ စွပ်စွဲခြင်းကိုခံခဲ့ရဖူးပါသည်။ မည်သူ ကမည်သို့ပင် စွပ်စွဲစေကာမူ ဆရာတော် သည် ထိုစကားကို ပုဂ်္ဂလဓိဌာန်ဖြင့် ပြန် လည်၍ ချေပခြင်းကိုကားမပြု။ ထိုသူနှင့် တကွအများပရိသတ်က ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် နှင့်ယုံမှားခြင်းမဖြစ်ရလေအောင် ဓမ်္မဓိဌာန်ဖြေရှင်းချက် ထုတ်သည်ကိုတွေ့ ရသည်။ သူကိုယ်တိုင်က ““ဦးဥတ်္တမ အကြောင်း””ဟု စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုရေး ပြီးထုတ်ဝေရာ နိုင်ငံရေးတရားဟောစက ပုသိမ်နယ်ကျောင်းကုန်းတွင် သူဌေးတစ် ယောက်၏ အိမ်အပေါ်ထပ်တွင် သီတင်း သုံး၏။ထိုသူဌေးတွင်သမီးပျိုတစ်ယောက် ရှိရာ သူဌေးက သူသမီးကိုလူထွက်ပြီးယူ ပါ။ စည်းစိမ်ပါပုံအပ်မည်ဟုပြော၏။ ထို ငယ်စဉ်ကပင်လျှင်လောကီကာမစည်းစိမ် ကို မစင်ဘင်ပုတ်ကဲ့သို့ စွန့်ပစ်လာခဲ့ပုံကို တရားဓမ်္မပြ၍ ရေးသားထားသည်။ ထိုသူဌေး၏ နာမည်နာမကိုပင် ရေးသား ဖော်ပြရာ ထိုသို့ထုတ်ဖော် ရေးသား ခြင်းဖြင့် မဟုတ်မမှန်လျှင် ဆိုင်ရာတို့က တရားစွဲဆိုခြင်း၊ ငြင်းကွယ်ခြင်းပြုကြ မည်ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က မငြင်းခဲ့ကြပေ။
သည်းခံခြင်း၌ ဆရာတော်သည် နည်းယူလောက်ပေသည်။ တစ်ခါက ကာလကတ်္တားတွင် မြန်မာပြည်မှ ရှောင် တိမ်းသွားပြီး စားပေါက်ပွင့်နေသော လူ တစ်ယောက်၏သတင်းကိုသူရိယသတင်း စာသို့ ရေးပေးဖူး၍ ထိုသူက ရန်ရှာပြီး ရိုက်နက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ ဂျပန်မှအပြန် ဘုံဘေမြို့မီးရထားဘူတာတွင် မြန်မာ ပြည်မှပြောင်းသွားသော မျက်နှာဖြူရာ ဇ၀တ်ဝန်ထောက်တစ်ယောက်က ““ဟေ့ ကောင်””ဟူ၍ ဗမာစကားဖြင့် ရိုင်းပြစွာ ခေါ်၏။ ဆရာတော်က ဘုံဘေအရေးပိုင် နှင့် နှုတ်ဆက်စကားပြောနေဆဲဖြစ်ရာ အရေးပိုင်ကနားမလည်၍ ဘာပြောတာ လဲဟု ဦးဥတ်္တမကိုမေးရာ၊ ဆရာတော်က ““ဟေ့ကောင်””ဆိုတာ တိရစ်္ဆာန်ကိုသုံးစွဲ တဲ့စကားဟု ဖြေရှင်းပြရ၏။ အရေးပိုင် က ရာဇ၀တ်ဝန်ကို ဘာကြောင့်ဤသို့ ခေါ်ရသလဲ၊ ထွက်သွားလိုက်ဟု မောင်း ထုတ်မှ ရာဇ၀တ်ဝန်ထွက်သွားသည်ဟု သိရ၏။
ဆရာတော်သည် မကွယ်လွန်မီ မတ်တတ်နာဖြင့် အတော်ပင်ဦးနှောက် အင်အား၊ လူအင်အားချို့တဲ့နေရာ ရန် ကုန်မြို့ထဲတွင် စိတ်မနှံ့သူတစ်ဦးကဲ့သုိ့ သွားလာနေတတ်၏။သို့သော်စိတ်ကား ဖောက်ပြန်သည်ဟူ၍မဆိုသာ။ စကား ပြောဆိုသည့်အခါ တစ်ခုမျှ ချွတ်ယွင်း သောစကားမပါပေ။ အားနည်းသည့် လက်္ခဏာကိုသာတွေ့ရှိရဖူးကြောင်းသိရှိ ရသည်။ ဆရာတော်ပျံလွန်တော်မူသော အခါ၌ပင် ယိုကိုဟားမားစပီစီဘဏ်တိုက် ၌ သူပိုင်ရန်ပုံငွေ ယန် ၂၀,၀၀၀မျှရှိသည်။ ထိုအခါက မြန်မာငွေ (၂၅,၀၀၀)မျှတန် သေးသည်ဟု သိရ၏။ ငွေကိုရေလိုသုံး နိုင်သော်လည်း ထိုငွေဖြင့် ကျန်းမာလျှင် နိုင်ငံခြားသို့သွားရောက်သာသနာပြုရန် ရည်ရွယ်၍ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ ကိုယ်ကျိုး အတွက် မသုံးဘဲ ဆွမ်းပင့်ကျွေးမည့်သူ မရှိလျှင် အငတ်ခံသည်အထိ ချွေတာ ခြိုးခြံပြီး မိမိကိုယ်ကိုပင် ဆင်းရဲခံသည်။ သို့အတွက် ဆရာတော်၏ ကိုယ်ကျင့်တ ရားမှာစိုးစဉ်မျှ ယုံမှားစရာမရှိပေ။
သို့နှင့်ပင်ဆရာတော်သည် သွားရင်း လာရင်းအားနည်း၍ တစ်ခါတစ်ရံလဲကျ ၏။ တွေ့သောသူများက ပွေ့ထူပြီး ဆေး ရုံပို့ရသည်။ ငြိမ်ငြိမ်နေလျှင် သူ၏ရောဂါ ပိုဆိုးမည်ဟု ဘယ်သောအခါမျှ အနား မနေဘဲ လမ်းလျှောက်၍သာနေသည်ကို တွေ့ရ၏။
ဆရာတော်ဦးဥတ်္တမပြုစုပျိုးထောင် ခဲ့သော တက်ကြွသည့်နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ် များမှ ဆက်သွယ်၍ ၁၂၉၂ ခုနှစ်တွင် တို့ဗမာအစည်းအရုံးအမည်ဖြင့်သခင်ပါ တီပေါ်လာ၏။ ထိုအခါမှစ၍ သခင် ဘသောင်းနှင့် ဗမာ့ခေတ်ဦးခင်တို့ သခင် တစ်စုသည် ၀ိုင်၊ အမ်၊ ဘီ၊ အေဆရာ တင်ရေးသားသော ““တို့ဗမာသီချင်း””ကို လက်သီးလက်မောင်းတန်း၍ စတင်သီဆို လာကြ၏။ လူငယ်များ၏တက်ကြွနေ သောစိတ်ဓာတ်ကို ရဲစိတ်ရဲသွေးထပ်မံ ဖြည့်စွက်ပေးကြသည်။ ထို့နောက်တွင် တို့ဗမာသခင်ဟူ၍ ကျောင်းသားအများ ကဦးဆောင်ပြီးစည်းရုံးကြရာ၁၉၃၆ခုနှစ် ၌ကောလိပ်သပိတ်မှစ၍အောင်ကျော် သေရပြီးနောက် တို့ဗမာသခင်တို့၏ အထူးတက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းတွင် အမြဲခေါင်းဆောင်၍ပါဝင်ကာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့်ရဲဘော်သုံးကျိပ်တို့ ဂျပန် သို့ထွက်သွားပြီး ဒုတိယကမ်္ဘာစစ်တည်း ဟူသောအခါကောင်းကိုယူ၍ ဂျပန်နှင့် ပူးပေါင်းလျက် အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်၏။ နောက်အင်္ဂလိပ်နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ဂျပန်ကို တိုက်၏။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့ရာ ထိုအဆင့်ဆင့်သော တော်လှန် ရေးတို့တွင် ဆရာတော်ဦးဥတ်္တမ၏ ပထမ ဦးဆုံးသောစိတ်ဓာတ်တော်လှန်ရေးက အကြောင်းရင်းခံသည်မှာ မလွဲကြောင်း ပါလီမန်လွှတ်တော်အရပ်ရပ်မှာပင် ထုတ် ဖော်စကားဆိုထားကြပြီဖြစ်သည်။
၁၉၃၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၉) ရက် (၁၃၀၁ ခုနှစ် ၀ါခေါင်လဆုတ် ၁၁ ရက်)နေ့တွင် ဆရာတော်ဦးဥတ်္တမသည် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၌ ဘ၀နတ်ထံပျံလွန် တော်မူရာ ပျံတော်မူ၍ နှစ်ရက်ကြာပြီး နောက် စက်တင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့ တွင်ကျင်းပသော မြန်မာပြည်အောက် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ အမတ်များ အားလုံးဝမ်းနည်းသည့်အထိမ်းအမှတ် ဖြင့် (၅) မိနစ်ရပ်နားပြီး အရိုအသေပြု ကြသည်။ သက်ဆိုင်ရာဆွေမျိုးများသို့ လွှတ်တော်မှတ်တမ်းအရ ၀မ်းနည်း ကြောင်းသ၀ဏ်လွှာပေးပို့ကြပေသည်။ လွှတ်တော်အမတ်များ အကျယ်တ၀င့် ချီးကျူးကြ၏။
ထို့နောက် (၁၉၅၄)ခုနှစ်၊ စက်တင် ဘာလတွင်ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံပါလီမန်တွင်လည်းဆရာတော် ဦးဥတ်္တမ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ကို ချီးကျူး သတိရသော အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် ပြော ဆိုကြပေသည်။
ဆရာတော်၏ ပညာဂုဏ်ကျေးဇူး၊ ကိုယ်ကျိုးမဖက်တိုင်းပြည်အတွက်အနစ် နာခံခဲ့သော ဂုဏ်ကျေးဇူး၊ ဘုရားသား ရဟန်းတော်ပီပီ သီလ၊ သိက်္ခာတို့ကို ထိန်းသိမ်းတော်မူလျက် တရားဓမ်္မတို့ကို ကျင့်သုံးတော်မူသော ကျေးဇူး၊ ခန်္တီပါရမီ ကိုကောင်းစွာဖြင့် ဖြည့်တော်မူသော ကျေးဇူးတော်တို့ကို ရည်မှန်းပြီးလျှင် ကျွန်ုပ်သည် ဤစာစောင့်ဖြင့် ရိုသေလေး မြတ်စွာ ပူဇော်ကန်တော့ခြင်းပြုပေသည်။
« ရွှေည၀ါဆရာတော် မှော်ဘီမြို့နယ် သဲအင်းဂူ အနီးတွင် ၀ါးကျောင်းကလေးဖြင့် ဆက်လက်သီတင်းသုံးနေ
နည်းပညာ ဆိုင်ရာဝက်ဆိုဒ် များ.. »